Kacha mma Chapati Production Line Machine CPE-800 Manufacturer na Factory | Chenpin
CHENPIN nri igwe CO. LTD
Akpaka Flatbread Production Line
CPE-800 Oke Kachasị Ike Flatbread akara
CPE-620 Ugboro ikike Flatbread dị elu
CPE-400 Obere ikike Flatbread Line
Akpaka Lacha Paratha Production Line
CPE-788B Paratha ingpị na Igwe Igwe
Akpaka Ciabatta / Baguette Bread Production Line
Mgwakota agwa Laminator Production Line Machine
Gburugburu Crepe Production Line Machine
Achịcha & Quiche Production Line Machine
Gburugburu achịcha Production Line Machine
AKA ANY C
Automatic Mgwakota Laminator Production Line
Akpaka Automatic Crepe Production Line
Akpaka achịcha & Quiche Production Line
Automatic gburugburu achịcha Production Line
Chọọ Site Na Nri
Ihe na-eri Paratha
Nha (L) 22,510mm * (W) 1,820mm * (H) 2,280mm
Eletrik 3 adọ, 380V, 50Hz, 80kW
Ike 3,600-8,100 (PC / Ọrụ Nchịkwa)
Model Nke CPE-800
Pịa nha 80 * 80 cm
Oven Atọ atọ
Jụrụ 9 larịị
Onye na-akwado Counter 2 ahịrị ma ọ bụ ahịrị 3
Ngwa Tortilla, Roti, Chapati, Burrito
Chapati (nke ọzọ edepụtara chapatti, chappati, chapathi, ma ọ bụ chappathi, nke a makwaara dị ka roti, rotli, safati, shabaati, phulka na (na Maldives) roshi, bụ achịcha na-ekoghị eko nke sitere na mpaghara India na isi nri na India, Nepal, Bangladesh , Pakistan, Sri Lanka, East Africa, Arabian Peninsula na Caribbean.Chapatis bụ ntụ ọka wit niile a maara dị ka atta, gwakọta ya na mgwakota agwa na mmiri, mmanụ na nnu nhọrọ na ihe eji agwakọta a na-akpọ parat, ma sie ya na tava (ewepụghị skillet).
Ọ bụ a nkịtị staple na Indian n'ógbè buru ibu nakwa dị ka n'etiti expatriates si Indian n'ógbè buru ibu n'ụwa nile.
Imirikiti chapati bụ ndị igwe nrụpụta na-arụ ugbu a. Mmepe nke Flatbread hot press bụ otu n'ime isi ọkachamara ChenPin. Igwe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ dị larịị ma na-enwe mmetụta karịa ndị ọzọ chapati.
Ka oge na-aga ndị ahịa na-achọ maka mmepụta dị elu karị na Model CPE-800.
CPE-800 Model Capacity: Pịa 12 nke 6 Inch, 9pcs nke 10 Inch na 4pcs nke 12 Inch na-agba ọsọ na 15 cycles kwa nkeji.
■ njikwa njikwa ọnọdụ ngwaahịa n'oge ịpị ka ọ dịkwuo ngwaahịa ma na-ebelata ihe mkpofu.
■ Njikwa okpomọkụ na-enweghị atụ maka mbadamba mbadamba ọkụ na ala ọkụ
■ Mgbaze bọl ebu: Anya n'etiti bọọlụ mgwakota agwa na-akpaghị aka na-ejikwa sensọ na 4 ahịrị, 3row na 3 ahịrị conveyors dịka ngwaahịa gị.
■ Easy, ngwa ngwa na adaba ịgbanwe Teflon ebu belt.
System Usoro ntuziaka akpaaka maka Teflon ebu nke ọkụ ọkụ.
Size: ogologo mita 4.9 na ọkwa 3 nke ga-eme ka achịcha tortilla dị n'akụkụ abụọ.
■ Oven ahụ okpomọkụ na-eguzogide. Independent burner ọkụ na olu nke gas akara.
A-system Cooling system: Size: 6 mita ogologo na 9 level nke na-enyekwu oge obi jụrụ na tortilla tupu ị kwakọta. Ejiri njikwa ọsọ na-agbanwe agbanwe, draịva onwe ya, ntuziaka na njikwa ikuku.
Ikpoko onu chapati ma bugharịa chapati n'otu otu faili iji nye nri nri. Enwere ike ịgụ mkpụrụ nke ngwaahịa a. Ejiri ya na sistemụ pneumatic na hopper iji chịkwaa ngagharị nke ngwaahịa ahụ iji chịkọta ya mgbe ọ na-akwakọba.
Previous: Roti Production Line Machine CPE-800
Next: Lavash Production Line Machine CPE-800
Igwe nri Chenpin
Akaụntụ azụmahịa WhatsApp
Main Product (Biko pịa ka ịmụtakwu →): Automatic Tortilla Flatbread Production Line, Automatic Lacha Paratha Production Line, Automatic Pizza Production Line, Automatic Ciabatta / Baguette Bread Production Line, Automatic Dough Laminator Production Line, Automatic Rope Production Line Line, Automatic achịcha & Quiche Production Line, Automatic Gburugburu achịcha Production Line
© Copyright - 2010-2021 : All Rights Reserved. Hot Ngwaahịa - Sitemap
Automatic Dough Laminator Machine, Croissant Lamination Machine, Dough Laminator Production Line, Dough Laminator Machine, Dough Laminator Line, Akpaka Lacha Paratha Production Line,